Maninona ianao no mila akanjo fandroana?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-06-23
Ny mpitsidika ny trano dia mety hitsidika anao lavitra. Azonao atao ny misoroka ny mikorisa amin'ny efitrano fidianao mankany amin'ny lalimoanao rehefa vonona ny akanjo ianao. Ny akanjo fandroana izay lava ampy hitazomana anao dia ny vahaolana tonga lafatra amin'ny havana tsy mahalala ny filanao fiainana manokana. Mitehiriza akanjo fandroana fanampiny ho an'ny h ...
Inona no ataon'ny mpiaro kidoro?
Mpiaro kidoro no mahavita zavatra efatra: mitazona ny fahadiovan'ny kidoro. Ny vatan'olombelona dia goavambe. Mitsemboka daholo isika amin'ny alina. Samy mamokatra solika avy amin'ny hodintsika daholo isika. Ny sasany amintsika manao makiazy. Isika rehetra koa dia nandatsaka sela maty. Misy hetsika hafa izay afaka mamokatra "toerana lena" amin'ny ...
Inona no atao hoe mpiaro ondana ary nahoana ianao no mila iray?
Raha ny resaka fandriana no resahina, maro no mifantoka amin'ny lambam-pandriana sy ny ondana. Na izany aza, misy sombin-javatra lehibe ao amin'ny fanangonana fandrianao izay afaka manitatra ny ain'ny ondana anao: mpiaro ondana. Zipera mpiaro ondana dia mikatona, manome sakana amin'ny alergen mahazatra mba hahafahanao miaina ...